Madaxweynaha Hirshabelle oo maanta gaaray Magaalada Baledweyne(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle, Cali C/laahi Cosoble, ayaa waxaa uu maanta gaaray Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Madaxweynaha iyo wefdi uu hogaaminayo oo duhurnimadii maanta ka amba baxay Magaalada Jowhar, ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay Magaalada Baledweyne.
Masuuliyiinta Maamulka Gobolka Hiiraan iyo weliba shacabka reer Baledweyne, ayaa si wayn u soo dhaweeyay wefdiga Madaxweynaha Hirshabelle.
Suxufiyiinta, ayaa waxay soo sheegayan in wafdiga Madaxweynaha ay ku jiraan Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somaliya iyo ninkii uu tartanka kaga adkaaday waa Maxamed Cabdi Waare.
Cali C/laahi Cosoble, ayaa ujeedadiisa ugu wayn ee uu u tagey Magaalada Baledweyne waxaa lagu sheegay, sidii uu dadka reer Hiiraan ugu qancin lahaa inay aqbalan Maamulka Hirshabelle.
Cosoble, ayaa Odayaasha Dhaqanka ugu yeeray inay taageeraan Maamulka Hirshabelle, walow ay Odayaasha Dhaqanka horey uga biyo diideen.
Ma cadda sida uu Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble uu ku soo dhawayn doono Hirshabelle, maadaama la’ogyahay in horey uu uga dhiidhiyay tagitaanka Magaalada Jowhar.